Kedu ka ọrụ ebere si arụ ọrụ? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Charity igwe kwụ otu ebe - mkpebi ndị bara uru
Charity igwe kwụ otu ebe - mkpebi ndị bara uru
Kedu ka ọrụ ebere si arụ ọrụ?
N'ezie, ụzọ kachasị mfe ijinọkwasima nweta ego maka aọrụ ebereihe kpatara ya bụ isonyere otu n'ime ọtụtụ ndị ahazirina-agba ịnyịnyanke ndi otu oru ebere di iche iche tinyere. Onyeọrụ eberena-eme atụmatụ ụzọ ahụ, na-eburu gị gia, ma na-enyekarị ọrụ nkwado, ụlọ, na nri n'okporo ụzọ.Mkpebi 22 2015
Na GMBN, anyị nwere obi ụtọ na anyị enweela ike ime ka agụụ anyị maka ịnya igwe ugwu bụrụ ọrụ anyị. Ma olee otú ị pụrụ isi mee nke ahụ? Kedu ụdị ọrụ ị ga-eche iji gbanwee ndụ gị gburugburu ịgba igwe ugwu? Ga-eju ole nhọrọ dị, ka anyị lee anya na nke a. (Egwú kọmputa dị jụụ) Ya mere, nke mbụ, ebee ka ị na-amalite? Ọfọn, mgbe ị ka na-aga akwụkwọ mgbe ahụ ị nwere ike ichegbu onwe gị gbasara ụdị nkà na ọzụzụ ịchọrọ iji bido ịmalite nke ọma.
Photography na ide bụ nkà siri ike maka akụkụ mgbasa ozi. Ma ọ bụghị ya, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgba ọsọ ọkachamara, mgbe ahụ ịgba ọsọ na nsonaazụ dị ukwuu na-eduga ohere. Na imewe na injinịa, gbaa mbọ hụ na mgbakọ na mwepụ gị ruru oge.
Gịnị banyere ịchụ nta ọrụ? Nwere ike n'ezie bido na ebe nrụọrụ weebụ na-arụ ọrụ mgbe niile ma chọọ ọrụ ụlọ ọrụ, mana ọtụtụ mgbe ọrụ ndị ziri ezi anaghị adị mfe ịchọta na ụdị weebụsaịtị ndị a. Obi dị m ụtọ na enwere ụfọdụ weebụsaịtị ọrụ igwe kwụ otu ebe na-enye ọtụtụ nhọrọ. Nnukwu akụ na UK bụ BikeBizand na US, Ndị na-ere ahịa igwe.
elu igwe kwụ otu ebe
Enwere ọrụ dị iche iche site na igwe ahịa ụlọ ahịa gaa ahịa na ndị njikwa akara na ọbụlagodi ndị nta akụkọ gafere. Ihe ndi ozo bu udiri onwe ha dika SRAM, Shimano na Santa Cruz dika ihe omuma atu na-achota oru na obuna ulo oru ndi a na-agbasa na weebụsaịtị ha. Ma ọ bụghị ya, ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe na ụzọ ụgbọ ala na-achọ enyemaka aka mgbe niile, ọkachasị n'oge dị elu.
Offọdụ n'ime ihe onwunwe anyị chọtara dị na nkọwa dị n'okpuru. Nkwụsị mbụ maka ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya nke na-achọ ibi ndụ site na igwe kwụ otu ebe na-akwado ịnya ịnyịnya n'onwe ya. Ọ bụ ezigbo nrọ, n'ihi na onye ọ bụla chọrọ ka akwụghị ụgwọ ịkwọ ụgbọala ma nweta akụrụngwa n'efu n'otu oge ahụ? Ọ na-egbuke egbuke.
Ọ dị mfe ikwu karịa ịme agbanyeghị, ị ga-abụrịrị ọsọsọ, nkecha, ma ọ bụ dị oke mma na ịge ntị, mana enwere ike ịme ya. Agbanyeghị ụzọ ole na ole iji wuo isi okwu gị na soshal midia na-eso mmekọrịta mmadụ na ibe ka ọ bụrụ onye nnọchi anya mba, ndị na-eme egwuregwu ndụ, ma ọ bụ ndị na-eme ihe ike. Drivingzọ ọzọ ịkwọ ụgbọala si akwụ ụgwọ bụ ịkwọ ụgbọala ma bụrụ onye nchịkwa ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ nduzi.
Get na-akwụ gị ụgwọ ka ị pụọ n’ịnyịnya ígwè gị wee chụọ ihe a niile na-enweghị ndị nkwado ma ọ bụ ndị na-eso ụzọ. Anotherzọ ọzọ a na-akwụ ụgwọ iji kwụọ ụgbọala site na ịkụziri ndị ọzọ ihe. Nkuzi ikike ga enyere gi aka inweta ugwo igba ugboala gi ma n’inyere ndi ozo aka ka ha buru ezigbo ndi uzo.
A n'ezie ọrụ na-akwụghachi ụgwọ ọrụ na ka bụ nke ukwuu banyere ịkwọ ụgbọala.- aha m bụ Neil, Abụ m onye bụbu ọkachamara downhill racer. Na onye bụbu ọkachamara na-agba ịnyịnya ígwè.
M banyere, ọ bụrụ na m na-ekwu eziokwu, maka na ike gwụrụ m. Mgbe m gbachachara ọsọ ọsọ, amaghị m ihe m ga-eme. Na nkuzi nkuzi dị ka ihe eke.
M ka nwere ike ịgba ịnyịnya ígwè ma site na mgbe ahụ laghachiri m na-agba ọsọ, yabụ amalitere m ịgba enduro. Ọzọ a ụdị ọkachamara, nwetara ezigbo nkwado, ya mere dị ka ọkara nchịkwa, ọkara ọkachamara enduro racer n'oge ahụ, Abụ m. Echere m na ndụmọdụ m ga-abụ, ime ihe n'eziokwu, nweta ezigbo mgbatị.
Emere m ya na mbụ na otu nzukọ dị na UK a na-akpọ CTC, abụrụla m onye ọkwọ ụgbọ ala maka afọ 10 mana ịtọpụ onye ọ bụla na-anya ụgbọ ala na-ewe ntakịrị nka ma ị nwere ike ịchọ enyemaka obere na nke ahụ, mgbe ahụ ọ gbasara ihe niile ahụmahụ. M zụrụ ọtụtụ, mara mma mgbe m hụrụ 30 ma ọ bụ 40 ndị mmadụ a izu. N'ezie, ihe karịrị otu afọ ma ọ bụ abụọ ọ ga-ewulite ikike gị.
Yabụ ị nwere ike ịlele mmadụ ịnya ụgbọ ala, see ha ihe nkiri ma họpụta ihe ị chere na ha na-eme nke ọma, kedu ihe ga - enyere ha aka inwe ntụkwasị obi, kamakwa ihe ha nwere ike ime karịa, na mgbe ụfọdụ ọ bụ naanị ihe abụọ ma ọ bụ atọ pere mpe nwere ike ime nnukwu ọdịiche na ịnya gị, ma ọ bụ ọnọdụ ụkwụ ziri ezi, na-emegharị ntọala ịnyịnya ígwè gị ntakịrị, ma ọ bụ na-ele otu nkà ịgba ịnyịnya ígwè nke kwesịrị ịtụgharị n'ezie iji meziwanye. Ma ọ bụ ihe bara uru n'ezie. Ọ nwere ike ịbụ ezigbo ihe ọchị.
Aga m asị na nsogbu dị na mgbe ụfọdụ ọ dị ka ị na-agba ọtụtụ, mana n'eziokwu ị nwere ike ịga ije ma guzo n'otu ebe kwa ụbọchị wee gwa ndị mmadụ gbasara nsogbu yiri nke a, ihe ị hụrụ ụbọchị gara aga ịnwe. Ya mere enwere ike ikwughachi oge ụfọdụ. Ma na njedebe nke ụbọchị, ọ bụrụ na ị na-enyere mmadụ aka imeziwanye nkà ha ịnya ịnya, ma ị na-agba ịnyịnya ígwè n'onwe gị, mgbe ahụ ọ nwere ike ịdị mma. (upbeat ska music) - N’ebe kachasị mfe ịchọta ọrụ na ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe bụ ịrụ ọrụ n’ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe.
O nwere ike ịbụ ebe ntinye kachasị mma, ọ na - enye gị ohere ịchọpụta ya, lee ọnọdụ ahụ, lee ka ọrụ ya si arụ ọrụ. Ga-enweta ụfọdụ n'ime ọmụma na ma eleghị anya, ọbụna izute ụfọdụ jụụ ndị mmadụ n'ụzọ. Zute ndị ziri ezi ma ị nwere ike ịnweta ohere iji rụọ ọrụ na-atọ ụtọ karị na ụlọ ọrụ ahụ n'onwe gị.
Ọtụtụ ndị na-ede blọgụ na ndị ọrụ ịgba ọsọ ị meworo ka ha na-atụgharị uche na azụmahịa ha. Yabụ ọ bụ ebe dị mma ịmalite ọrụ gị na ụlọ ọrụ ahụ. Ndị ọkaibe igwe kwụ otu ebe bụ Danny MacAskill na nke anyị Henry na Tech.
Onye bụ onye egwuregwu bọọlụ ama ama ama ama ama ama na nso nso a. Ya mere, ka anyị nwetakwuo nghọta site na ya - Abụ m Henry, adị m afọ iri abụọ na asaa ma si na West Midlands, ọnọdụ m na-abụkarị onye na-arụ ụgbọ ala, na-amalite n'ọmụmụ ihe tupu m gbagoo n'ọsọ egwuregwu. M banyere ya, M hụrụ n'anya na-arụ ọrụ na anyịnya igwe.
Na ichoputa otu esi enweta ugwo maka ya mgbe m gụsịrị ulo akwukwo yiri obere ihe m. Naanị ịmalite ịrụ ọrụ na ụlọ ahịa dị na mpaghara wee kpebiri ịga njem. Achọrọ m oge ọkọchị.
Nke ahụ dị ezigbo mma, ọ pụtara na m matara ọtụtụ igwe dị egwu iji mụta ihe, yana ọtụtụ ebe dị iche iche. Ekwesiri m ịgba ịnyịnya ígwè, zute ọtụtụ ndị dị jụụ na-emekwa otu ihe ahụ, ma mesịa dakọtara na oge ịgba ọsọ ahụ. Agara m n'ime ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe, anyị ga, mgbe anyị gụsịrị akwụkwọ, achọrọ m ịmụ etu esi enweta ego site na agụụ m, amalitere m ịrụ ọrụ na ụlọ ahịa dị na mpaghara tupu m kpebie ịchụso oge okpomọkụ na n'etiti ugwu na njem na ndịda ugwu ma na-agba ịnyịnya ígwè m gburugburu afọ niile, nke dị ezigbo mma dịka ọ bụghị naanị na m zutere ọtụtụ ndị nwere ụdị obi ahụ, kamakwa mụtara ọtụtụ igwe dị mma.
Ọ bụrụ na m ga-enye mmadụ ndụmọdụ banyere otu esi enweta ụdị ọrụ a, enwere m ike agaghị atụ egwu itinye ihe egwu ma ọ bụ ime ihe nwere ike ịbụ obere ihe. Mgbe m gbara afọ iri na asatọ ma ọ bụ iri na iteghete, ndị enyi m niile nọ na mahadum, m kwuru, ee, n'ezie achọrọ m ịgba igwe kwụ otu ebe na ọ bụ etu o si arụ ọrụ, ụfọdụ ihe emezughị, ụfọdụ ihe emee. Ma mgbe niile ọ dị mma na njedebe.
Nwere olileanya maka ihe kachasị mma, kwadebe maka nke kachasị njọ, nke ahụ bụ okwu m mgbe m na-eme njem. M mgbe niile ji ezi uche ego nke ego, ma mgbe ụfọdụ, m na-echeta na-agbadata ise New Zealand dollar ozugbo na nke ahụ bụ niile, ma mgbe ahụ, ọ na ụdị arụ ọrụ nke ọma otú ahụ ka m bụ nnọọ kechioma m na-eche, ma n'ezie m nsogbu ole na ole, ọkachasị mgbe m gara n’etiti France na New Zealand, oge ụfọdụ m ga-achọ ọrụ m chere na m ga-atụkwasị obi ma ha mere. t nnọọ abụghị.
Kama nke ahụ, oge ụfọdụ a na m arụ ezigbo ọrụ n’ezie n’enweghị atụmanya m. Ihe mere m ji hụ ya n'anya Ọfụma, enwere m obi anụrị na m nwere ike ịrụ ọrụ na ihe m nwere mmasị na ya, ọ bụ usoro dị mma maka m ịmụtakwu ọhụụ, ọkachasị n'ọhịa nke ọgba tum tum na igwe. Na isoro ụfọdụ ndị na-asọpụrụ n'ezie.
N’ime ụlọ ahịa ụfọdụ m rụrụ ọrụ, ndị ọrụ ahụ dị ezigbo mma. Inwe ike ịmụ ihe n'aka ha na-abụkarị ihe na-enye afọ ojuju. Mgbe m gụsịrị akwụkwọ, anọ m na-eche na ịghọ igwe na-anya igwe bụ nrọ m.
Enwere m nnọọ mmasị ịkwụ ụgwọ iji mee ya. Na n’ikpeazụ ọ bụghị naanị na-amụ ma mgbe ahụ na-ezi ihe, ọ bụ a ezigbo ihe m. Rụ ọrụ na iko ụwa bụ ihe m na-achọ ime mgbe niile.
Ma ọ bụ ezigbo afọ ojuju nke ebumnuche m iru ọkwa ahụ.- Workingrụ ọrụ na ngalaba mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe bụ ọrụ nrọ ọzọ nwere ike ime maka ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya. Lelee ederede niile ma lelee ederede niile ma ị chere na ị ga-ịnya ya n’onwe gị.
Ọma ị maara ihe could nwere ike iburu na ọrụ ahụ, e nwere ụzọ ole na ole ga-esi zuo gị n'etiti etiti mgbasa ozi MTB. Ọtụtụ oge ọ bụ maka ịde ihe, ịse vidio, soshal midia. Mana ọrụ dị iche iche dịtụ ntakịrị.
N'ebe a na GMBN anyị nwere ọtụtụ ọrụ mgbasa ozi zuru oke. May nwere ike ọ gaghị eche na ị nwere ikike na ikike ị ga-eji gbaa ọsọ maka ịkwọ ụgbọala, m na-ekwu na ọ bụghị, ọtụtụ nwere. Ma ị ka nwere ike ịkwụ ụgwọ iji ụgbọala, nri? Ide banyere igwe kwụ otu ebe pụtara na ị nwere ike iburu ụfọdụ ngwongwo kachasị ọhụrụ na nke kachasị mma n'ihu ọha, ịnya ụgbọ ahụ dịkwa mma.
N'ịmara na ọ bụ naanị ndị ọkwọ ụgbọala ole na ole hụrụ ya. Mana ka anyi nuru maka onye mere oke ruru ha banyere oru nta akuko bu ugwu.- Aha m bu Andrew Dodd, ufodu ndi mmadu na akpo m Doddy, n’ezie mmadu nile kporo m Doddy.
Ọ dị ntakịrị, kpọọ m Andrew ka m kwuo eziokwu. Abụ m onye nduzi nke teknụzụ, n'ezie na ọwa ntanetị GMBN. Maka mụ na gị, nke ahụ pụtara na m bụ onye mmezi na m na-ahazi ntakịrị.
Anọla m na-agba ọsọ na-agba ịnyịnya ígwè maka ọtụtụ ọrụ m na-arụ, kemgbe 2001, arụrụ m ọrụ na otu n'ime magazin igwe kwụ otu nnukwu ugwu, Mountain Biking UK. Ejiri m foto na ihe mgbasa ozi m mụtara. Ngwunye nke Bekee gụnyere, nke ahụ doro anya na ebufere ya n'ime obere ederede ederede ntakịrị.
Ma mgbe ihe malitere ịgbanwe, kwupụta na-akpụ akpụ oyiyi, ọ bụ n'ezie a ezi uche mkpebi m na-arụ ọrụ ebe a. Nyefee nkà, Amaara m otú e si ekwu okwu banyere anyịnya igwe, M na-aghọta anyịnya igwe, ọ bụ otu ihe ahụ na-ede ya mere na ọ bụ n'ezie otu usoro. Ma ọ bụ yiri, ma ọ dịkarịa ala.
Mụọ ihe siri ike, nwee obi ụtọ n'ihe ị na-eme. Ọ bụrụ na ọ naghị atọ gị ụtọ. (ma ọkwọ ụgbọala na-achị ọchị) Enweghị m ike ịkọ ya! Enwere m ike ịchịkwa oge niile! - Olee otú ọ bụ fun? - Ikwesiri icheghachi ihe ị na-eme.
N'ezie, ịchọrọ ezigbo ihe ọmụma, m na-ekwu na ọ bụ iwu dị mma nke Bekee. ike ide na ikwu okwu nke ọma.- Na Frejus ọ na - eme n’etiti Frejus na Roquebrune, Roquebrune, Roquebrune-sur-Argens.
Argens.- Mara nke ọma banyere igwe kwụ otu ebe, yabụ na ị na-arụ ọrụ oge na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe na ngwụsị izu, nke a bụ ụzọ dị mma iji wuo nka na ihe ndị ahụ ma soro ndị enyi gị see ha. Chọghị ihe eji achọ mma, ị nwere ike iji ekwentị rụọ ya.
Ekwentị ị nwere ike ịhụ nke a. Na ụlọ ọrụ igwe bụ ebe dị ịtụnanya. Ndị jupụtara na m hụrụ n'anya ma mara nke ọma, ya mere enwere m ya n'anya na nke ahụ, mana ịnyịnya ígwè bụkwa ihe kachasị amasị m n'ụwa.
Ha anọwo na-adị. Ana m agụ mbipụta izizi nke Mountain Biking UK, Ọktọba 1988. Yabụ abanyela m igwe ruo ogologo oge, kedụ ihe m ga - eji mee ihe ọzọ? - Ugboro oge, yana ohere ndị nweere onwe ha, ụlọ akwụkwọ agaghị aba n'ime ọrụ oge niile na MTB oru nta akuko, mana enwere ike wuo ya na ọ bụ ụzọ dị mma iji zute ndị si ụlọ ọrụ ahụ ma nwee njikọ dị mkpa.
Kedu maka ihe maka ihe okike ndị anya? Ọ dị mma, ịme edemede nwere ike ịbụ ọnọdụ kacha mma, anyị niile hụrụ edits igwe kwụ otu ebe na ike ịmepụta na imepụta isiokwu onye ọ bụla chọrọ ịhụ dị oke mma, mana m zuru ezu, anyị nwere ndị na-ese ihe ederede zuru ezu ebe a na-eme ọtụtụ ihe. - Abụ m Tom Grundy na ọnọdụ m ugbu a bụ Onye Okike, ma ọ bụ nke ọzọ akpọrọ Filmmaker, m ga-asị. Ihe nkiri ma dezie isiokwu ndị a na GMBN Mụ na ndị enyi m chere na nke a bụ gịnị? Ọ ga-adị mma ịse foto ma ọ bụ opekata mpee foto.
Ya mere, ezobara m igwefoto mama m n'ụlọ wee mee obere isiokwu na pals m, tinye ha na ịntanetị ma site na mgbe ahụ ọ gafere. Aka na-atọ m ụtọ ịme nke a na nke ahụ bụ ihe m nwere ike ịmara banyere ndụ m ka m wee gara ebe ahụ ma lekwasị anya n'inwekwu isiokwu na ịmụ ọrụ nka nke ịse ihe nkiri na itinye ihe nkiri ndị ahụ na ịntanetị. Ndụmọdụ maka onye na-achọ ịbanye na ụlọ ọrụ ahụ ga-abụ na have ga-ahụ ya n'anya na mbụ n'ihi na enwere olile anya na ị ga-emefu ihe niile nke oge gị na ya.
Ọ na-ewekwa ọtụtụ nraranye, m ga-asị, ịga na mmemme, na-aga agbụrụ, nke ahụ bụ etu m siri mee ya na mbụ, ruo na agbụrụ mba wee gazie iko mba ụwa. Aga m eme ihe nkiri otu izu, aga m eme ihe nkiri otu ọnwa ma gaa n'ihu onwe gị ịmekwu ihe ma wepụta ya. Gosi ndị mmadụ na itinye aka na ya.
Mana ị ga-ahụ ya n'anya, mana echere m na nke ahụ bụ ihe kachasị mkpa n'ihi na ị ga-etinye oge dị ukwuu na ya yana ya mere ọ ga-abụ agụụ nke gị. Echere m na e nwere ọtụtụ akụkụ dị iche iche maka ịse ihe nkiri, ebe a na GMBN ị na-apụ ma na-eserese, ma ọ bụ na ị na-eche echiche ma ị na-ese ihe nkiri na ị na-apụ n'oké ọhịa ma na ị nọ ebe ahụ na-emepụta ihe, mana ị na-anọkwa igwe kwụ otu ebe Zụlite echiche na echiche wee rụkọta ọrụ na ndị ọzọ.
Ma mgbe ị laghachiri ị laghachi ma dezie na ọ bụ akụkụ dị iche iche nke ihe mgbe ahụ ị na-eme mpempe a na echiche ị nwere, echiche ndị ahụ ka na-agbanwe oge niile. Ma mgbe ahụ, ị ​​ga - ahụ etu ha si aga ụwa ma hụ ihe ndị mmadụ na-eche banyere ya, ma eleghị anya, mụta ihe na ya wee malite usoro ahụ niile. Usoro a dị iche iche na ihe ọ funụ, okike, na-atọ ụtọ na ntakịrị ọrụaka, enwere ọtụtụ ihe dị iche iche maka ịse fim nke m chere na m hụrụ ya n'anya ma debe ya na-atọ ụtọ. (egwu dị elu na kọmputa) - Enwere ọrụ ole na ole iji wuo akara, ọ bụghị naanị ụmụ okorobịa kacha elu na-eme mkpebi niile.
Site na ndị injinia na ndị nrụpụta ahịa na ire ahịa, akara bụ naanị ụlọ ọrụ. Ha ga-arụkwa ọrụ niile. Ha bụkwa ebe zuru oke ịchọta ụzọ gị n'ime ụlọ ọrụ ahụ.
Ugbu a, eleghị anya ị chere na igwe kwụ otu ebe na-enye ụbọchị ndị a abụchaghị ihe ị na-achọ, ha niile ezighi ezi, ma ị chere na ị ga-eme nke ọma karịa gịnị kpatara na ị gaghị eme naanị igwe kwụ otu ebe ịchọrọ? Anyị lere anya na-ele obere ụlọ igwe kwụ otu ebe na Dirt Shed Show n'oge na-adịbeghị anya, emeela m n'oge gara aga. Yabụ kedu maka ịga n'ihu n'ihu ntakịrị? Lọ ọrụ igwe kwụ otu ebe juputara na ndị na-emepụta igwe na injinia na-eme anwansi ha iji mee ka ịnyagharị anyị ka mma ma ka mma. Nke a bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji mee igwe kwụ otu ebe ka ọ bie ndụ na nnukwu ọdịiche na egwuregwu n'onwe ya.
Zọ kachasịsịsịsị esi abanye n'akụkụ ụlọ ọrụ a bụ imepụta ma ọ bụ ogo injinia na mahadum. Site n'ebe ahụ ị ga - ahụ ma ọ bụrụ na enwere ụlọ ọrụ dị. Ọtụtụ ụdị na-akpọsa ọrụ ndị a na weebụsaịtị ha, mana ọ ga-abụrịrị na ọ bara uru ịkpọtụrụ ha iji hụ ma enwere ụzọ ndị ọzọ ị ga-esi rụọ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ mgbe ị nọ mahadum ka ị nwee ike ịzọ ụkwụ. - Aha m bụ Ken Avery, Abụ m Onye isi oche nke Ahịa na Ahịa na Vittoria Industries North America.Enwere m ike ijikwa ụdị ndị a na-enye Vittoria n'ụwa niile n'ihe gbasara ngwaahịa.
Etoro m n’ịgba ịnyịnya ígwè n’elu ugwu. Amalitere m ịgba mgba mgbe m dị afọ iri na otu, nke dị ihe dị ka afọ iri atọ gara aga. Bgba ígwè dị nnọọ iche n’oge ahụ.
Nke ahụ bụ otú ọ dị, M na-agba ọsọ otu oge ma nwee taya taya dara ada. Otu ọkachamara a ma ama nyere m sooks n'ihi na enweghị m hoses. Ma ọ bụ 90s, ya mere ndị mmadụ na-eji tubing.
Na, zoputa agbụrụ m, n'ụzọ bụ isi n'ihi na emeghị m, Enwere m ihe ọ bụla n'oge ahụ. Enwere m ekele na mgbe agbụrụ ahụ gasịrị, azụrụ m otu ma nyeghachi ya onye ahụ. Anyị ghọrọ enyi.
Anọ m na ụlọ akwụkwọ sekọndrị n'oge ahụ. Na ọmụmụ ihe ụlọ, m ga-dị nnọọ ekwe ka taya. Naanị m ga-adọta profaịlụ taya na ime ụlọ ọmụmụ ihe.
M ga-amalite faksị ha ka nke a ọkachamara! Ha nwere ụdị sị whoa, nke ahụ bụ nzuzu, mana ha bidoro ihu ọma wee zigara ha ụlọ ọrụ taya ka ha hụ ihe ha chere. Na-apụghị izere ezere ha malitere ịkpachara anya. Ihe m gbalịrị bụ n'ezie inye aka.
Ma n'otu oge ahụ enwetara m ikike UCI dịka ọkwọ ụgbọ ala, enwere m ntakịrị ntụkwasị obi n'akụkụ ịgba ọsọ ahụ, na mgbe mahadum gachara ọ ghọrọ ọrụ, na afọ 20 ka e mesịrị, m ka nọ n'egwuregwu taya, na m hụrụ ya n'anya, ekele nke bụ ọnụ ụzọ m ghere oghe, ị maara na ị maara You ga-ezute ọtụtụ mmadụ, enwere ohere mgbe niile na gburugburu gị. Ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere ndị ọzọ aka, ọ nwere ike ịbụ ihe ọ bụla, ọ nwere ike ịbụ ho Ọ bụrụ na ị gbanwee taya dara ada, ọ nwere ike ịbụ otu esi edozi igwe kwụ otu ebe, ọ nwere ike ịbụ otu ị ga - esi dozie nkwusioru gị, otu esi enweta usoro iwu a, ihe ọ bụla ọ ga-alọghachikwute gị n'ezie m kwenyere na ya know maara na ọ bụ ụdị ihe ịgba ịnyịnya igwe kwụ otu ebe, gaa ihe ụfọdụ, gwa ụfọdụ ndị okwu, lee otu ị ga - esi nyere aka. Nke ahụ bụ ụzọ kachasị mma iji banye na ụlọ ọrụ a. (egwu elektrọnik dị jụụ) - Gịnị ma ọ bụrụ na ị lekwasịrị anya ugbu a na akara ma chee na ọ bụ gị kacha mma ịnọchite anya ha? Mgbe ahụ gịnị mere na ị naghị eme nke ahụ? Ozi gbasara ngwaahịa.
Na-emekarị-ewere ndị na-agba ịnyịnya na mgbe na-egosi na ngwaahịa na i nwere mara ika n'ime. Ọ bụ adịghị mfe ọrụ, ma ọ pụrụ ịbụ na-akwụghachi ụgwọ ọrụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya nke a ika. Daalụ maka ile anya ma mee ka anyị mata ụdị ọrụ ịchọrọ ịrụ na igwe kwụ otu ebe na ngalaba nkọwa dị n'okpuru, echefula, lelee njikọ njikọ anyị.
Ọ bụrụ n’ịchọ ịhụ akụkọ ndị ọzọ sitere na GMBN pịa ebe a ma ọ bụ ebe a, pịa ụwa ka ị debanye aha, nye anyị isi mkpịsị aka wee hụ gị oge ọzọ.
Enwere m ike ịgba ịnyịnya igwe kilomita 100?
Onye obula toro eto n’eto ezigbo arunwere ike ịnyakaigwe 100 kilomita. Mgbe m mere nke m, adị m 5 ụkwụ 10, ma dịrị kilogram 220, yabụ ọbụghị ezigbo mma. Ọzụzụ na-nọkwasikaigwe 100 kilomitadị obere ma sie ike, ma dabere na mgbatị ahụ, karịa ịgba ọsọ marathon.
That yiri nke ahụ ị maara? I debanyere aha maka otu narị kilomita. Ma eleghị anya, ọ bụ maka ezi ihe kpatara, mana ị gaghị enwe ike mgbatị ahụ ma ụjọ na-atụ gị. Ihe m na-ekwu bụ na ụjọ na-atụ gị. - Eeh.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya n'ezie n'ihi na ọkwọ ụgbọ ala nke otu narị afọ bụ nnukwu ihe, mana anyị chere na anyị nwere ike ị nweta gị n'ehihie ma ọ bụrụ na ị gbasoo ndụmọdụ a n'ọnọdụ kachasị elu, yabụ buru ụzọ hụ na agbụ anyị na ngwa anyị nọ n'ọnọdụ dị ọcha ma hụ agbụ anyị a kwaliri. Ọ bụrụ na a yinye bụ nke imeoyi na asat mgbe ahụ ọ ga-igba gị taya mgbali nke bara uru ike. M ga-ahọrọ 80, 90 PSI na nke ahụ bụ ezigbo mmalite maka igwe kwụ otu ebe, mana ọ dabere kpamkpam na ibu gị.
Kwesighi ịdị nro n'ihi na nke ahụ na-ezuru gị ezigbo ike, ma ọ bụ na ịchọghị isi ike n'ihi na nke ahụ na-adị, n'ezoghị ọnụ, na-ata ahụ erughị ala. Igwe igwe kwụ otu ebe bụ igwe kwụ otu ebe. (Obi ụtọ na egwu) Ọ dị ezigbo mkpa n'ihi na ka emechara, nri bụ mmanụ ọkụ na ịkwesịrị ijide n'aka na ị na-eri nri na ị andụ ihe ọ drinkingụ drinkingụ n'oge ị na-agba ịnyịnya ígwè.
apụl uru ụbụrụ
Mana tupu ị gawa, chee echiche nke ọma banyere ihe ị na-etinye na igwe kwụ otu ebe gị. Ee, ihe oriri na-edozi ahụ dị oke egwu ma nwee calorie ịchọrọ ma dị mfe igwu, mana anyị na-akwado ịga ụfọdụ nri siri ike mgbe niile dị ka sandwiches jam. , ma ọ bụ ọbụna flapjacks Na-achọ osisi oat nke yiri ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ọkachasị ma ọ bụrụ na ejighi gị ahụ ngwaahịa na-edozi ahụ na afọ gị. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe mberede na oge awa ikpeazụ, gịnị ma ị were gel.
Ihe ikpeazu ichoro bu iyi akwa ihu igwe mgbe mmiri ozuzo adighi. 13 ogo na anyanwụ. Zuru okè.
Jide n'aka na ị nwere ezigbo akụrụngwa dabara nke ọma ma nwee ntụsara ahụ n'ihi na ihe ikpeazụ ịchọrọ ime bụ ịnyagharị ihe ọdịnala ọrịa n'ihi na ọ ga-ewetu gị ala. Ọ nwere ike ịdị gị ka ị na-eyi lycra, mana ọ bụrụ na ị na-afụ ọnụ ma nwee ike ịnara ya, lycra dị ukwuu na-arụ ọrụ n'ezie ma ọ ga-eme ka ịnya ịnyịnya gị ka mma. (Joy music) Idebe chassis gị nke ọma dịka o kwere mee bụkwa nke kachasị mkpa.
Ma ọ bụrụ na ịmebeghị njem a ogologo oge gara aga, ị nwere ike nwee obere mmerụ na njedebe nke ụbọchị. Ma echegbula, ị ga-esi na ya. Otu ihe ị ga - eme iji gbochie iwe ma ọ bụ mkpasu iwe achọghị bụ iji ihe dị mfe dịka ude chamois.
Chegodi ya dika mmanu mmanu. Mụ onwe m anaghị eji ya, mana ụfọdụ ndị na-ahụ na ọ na-enyere aka. Nke a ga-enwe mmetụta.
Ọbụlagodi na ọ bụ naanị otu ọkwọ ụgbọ ala, ọ na - emetụta t ịme 100 kilomita gị ngwa ngwa o kwere mee ma belata ya na 70. Ọ bụrụhaala na ị nọrọ n'ihu azụ onye ọkwọ ụgbọ ala ị ga - echekwa ike dịka o kwere mee ma nye gị ohere kacha mma nke na-eme njem njem 100 gị. (egwu obi ụtọ) - Nke ahụ kwuru, ị ga-abụrịrị ezigbo mgbanwe na ike gị.
Yabụ ọ bụrụ na onye ụkwụ ị na-eso ga-esitụrụ ike maka mgbago elu gị, ịkwesịrị ịdị njikere ịlaghachi ma hapụ ha ka - yabụ gbalịa ịgbago mgbago ahụ na ije nke dị gị mma. Zọ a, ị naghị esure ike bara uru ngwa ngwa karịa ka ọ dị mkpa. - can nwere ike iche banyere ya ntakịrị dịka ụgbọ ala.
Make na-eme njem dị anya ma nwee obere mmanụ ọkụ. Mgbe ịmalitere n'ike n'ike, mgbe ị na-apụ n'okporo ụzọ ga-eme ngwa ngwa na-agagharị n'okporo ụzọ awara awara, ị ga-ere ọkụ ahụ ngwa ngwa ka ị wee nwee ike ịkwọ ụgbọala nke ọma ma ọ bụ otu ihe ma ọ bụrụ na ị na-elekọta ahụ gị ihe dị ka otu narị afọ - yabụ bụrụ onye na-achọghị mgbanwe na onye nwere ahụ iru ala n'ụzọ zuru oke na Mpempe Mpempe Mili Gị. (egwu obi ụtọ) - N'agbanyeghị ndụmọdụ ndị a, kilomita 100 ka na-ada obere egwu.
Ya mere, gịnị kpatara ị ga - eji gbaa kilomita iri abụọ na ise kama ịme ya ugboro anọ. - Eeh, ọ na-ada ka nzuzu, mana ọ na-arụ ọrụ, ọ bụghị naanị na anụ ahụ, yabụ na ị ga-enweta ihe ị ga-eri ma nwee ezumike dị mma, mana kwa uche. Anyị nwere ike ikpuchi kilomita iri abụọ na ise ya echegbula.
Ma n'oge na-adịghị anya a ga-enweta ihe mgbaru ọsọ kasịnụ - Right. Mee ihe kachasị obere nkwụsịtụ ị ga - eme n’agbata draịva 40 gị. Were nri were.
Ma eleghị anya, jupụta mmiri mmiri gị ma nọdụ ala n'uche tupu ịmalite usoro ọzọ. Naanị ihe m ga-ekwu bụ na ọ nwere ike ị gaghị achọ izu ike ogologo oge n’agbata draịva kilomita iri abụọ na ise n’ihi na ọ ga-abụ nnukwu ụbọchị ọ bụla ma ọ bụrụ n ’ịmalite iwu ọtụtụ ezumike, ị ga - ahụta oge na - agwụ. - Ọ bụrụ n ’ị mara etu ụbọchị si aga, ị nwere ike isiri onwe gị ike.
Ya mere gbalịa ịdọ aka ná ntị ma were nkwụsịtụ ndị ahụ ma eleghị anya n'etiti nkeji ise na nkeji iri tupu ịmalite ọzọ, Ọ dị mma, echere m na ọ bụ oge ịmalite - Ugbua? - O meela nkeji 10 - Oge mmadu na-efe. Yabụ ijide n'aka na igwe kwụ otu ebe gị nọ n'ọnọdụ kacha elu. Make hụ na uwe gị anaghị egbochi gị ma chebe onwe gị site na ifufe ka ị nwere ike site na isoro otu ma ọ bụ karịa ndị na-agba ịnyịnya nọ n'ihu gị na-eche maka ikike nke aka gị.
Ya mere, gbanye mmanụ dị ka ike kwere gị ma na-echekwa mgbanwe n'ụzọ ije gị. Echefukwala ịkpụcha ụkwụ gị. - Chere obere oge, enyi.
Echere m na anyị ghọtara na anyị agaghị akwado ịkwado ụkwụ, ọ nwere nnukwu ọdịiche? - N'ezie. Na-ele anya nke ọma. Obi dị gị mma.
onye na-agba agba agba agba agba agba
Gaa ngwa ngwa. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya - Anyị ga-eme mkparịta ụka a obere oge. Ka ọ dị ugbu a, biko nye edemede a nnukwu isi aka.
Jisie na ọchụchọ gị maka narị afọ. Ekwenyesiri m ike na ị ga-eme ya. Naanị soro ndụmọdụ anyị nyere.
Ma oburu na ichoro inwetakwu ihe omuma banyere ihe oriri nke ihe di oke nkpa, mgbe ahu anyi nwere edemede banyere ya.
Gịnị bụ mebere igwe kwụ otu ebe?
Mebereịgba ọsọ yiri ọsọ ụwa na-agba n'ihi na ọ bụ ndị ọgba tum tum na-agba ọsọ megide ibe ha ka ha buru ụzọ gafee ahịrị dị iche ichemebereụwa. Dị ka onye na-agba ịnyịnya na-agba ọsọ na onye nkụzi ha, ike nrụpụta metụtara ha na kọmputa ha n'ime mmemme ọduọ - ​​makaMebereTour de France, ọ bụ Zwift.
(egwu dị ndụ) O nwere ike ịbụ na ị hụla isiokwu anyị na-anya ụgbọ ala na Zwift, ị nwere ike ịhụla isiokwu anyị na-azụ na Zwift, ị ga-ahụrịrị otu isiokwu nke anyị na-agba Jens Voigt na Zwift, mana ọ bụrụ na 'ị chọghị 'm maara kpọmkwem otu ị si eji ya wee mee ka anyị gabiga ya. Ndị a bụ azịza nye ụfọdụ ajụjụ Zwift na-ajụkarị na ụfọdụ atụmatụ ndị dị mkpa. (Popular Music) - Na-agba ịnyịnya Zwift ị chọrọ akaụntụ, ịtọ ya, gaa zwift.com.
Ugbu a, ị nwere ike ịmalite site na nnwale n'efu wee kwụọ ụgwọ ọnwa kwa ọnwa, wee bulie ihe niile anyị chọrọ bụ onye na-azụ ụlọ n'ime ụlọ na mgbe ahụ ụzọ iji mee ka Zwift mara etu ị siri kwalite. Ugbu a dị mfe, nke ahụ nwere ike ịbụ ihe mmetụta ọsọ ọsọ dị ka ihe mmetụta Wahoo a nke na-agwa Zwift etu ngwa ngwa azụ azụ gị na-agba, ma site na kọmputa gị ma ọ bụ iPad gị ma ọ bụ iPhone gị, n'agbanyeghị ngwaọrụ ị jiri ya, mita ike ga Zwift Kesaa ike gị n'ụzọ ziri ezi karị, mana ọ bụrụ na ịchọrọ iwere ya na ọkwa ọzọ, onye a na-akpọ onye nkuzi nwere ọgụgụ isi na-enwe mmekọrịta na Zwift. N'ihi ya, ọ bụghị naanị na ọ na-agwa Zwift otú ike ị na-pedal, ọ na-agbanwe ego nke na-eguzogide ị na-eche na pedal, dabere na ihe na-aga, Zwift ma ọ bụrụ na ị na-arịgo ma ọ bụ gbadata ugwu ị ga-ama banyere ya dị ka ị n'ezie mara mgbe ị na-awagharị azụ n'azụ onye ọkwọ ụgbọ ala ọzọ.
Ugbu a echefula akwa nhicha ahụ na ọtụtụ mmiri mmiri, ịchọrọ ịnọ na mmiri ma gbalịa idozi igwe kwụ otu ebe gị na mpaghara nke ọma ma ọ bụ jiri fan iji mee ka ị jụụ. N'ikpeazụ, tupu anyị amalite, ọ bụrụ na ị na-ejikọta Zwift site na iji laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa gị wee budata Zwift Mobillink na Applọ Ahịa App na ekwentị gị bụ nnukwu echiche n'ihi na ọ pụtara na ị nwere ike iji nke a. Ọ dị ka ime njikwa.
Ha na-achịkwa ụyọkọ obere ọrụ na ọrụ anyị ga-aba n'ime ma emechaa. Naanị ihe ị kwesịrị ịma bụ na ekwentị gị jikọtara na otu netwọk WiFi dị ka kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ gị. (egwu dị egwu) Ugbu a enwere ụwa atọ dị iche iche ị nwere ike ịnya na Zwift, nke ọ bụla nwere mgbanwe na ụzọ dị iche iche.
Nke a bụ mbụ m ebe ahụ. (chịrị ọchị) E nwere Watopia, paradaịs South Pacific nwere ụzọ nt asatọ dị iche iche na ihe karịrị kilomita 42 nke ụzọ. Ma enwekwara ezigbo ụwa abụọ, nke mbụ n'ime ya bụ Richmond 2015 UCI World Road Race track nwere ụzọ anọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 19 nke okporo ụzọ tinyere ụfọdụ ugwu awara awara.
Onye nke ọzọ ịhọrọ site na ya bụ London na nkuzi 2016 Prudential RideLondon. Họrọ n'etiti na-efe efe gara aga iconic London akara ma ọ bụ na-akwọ ụgbọala n'ime obodo na 17 kilomita nke ụzọ. Kalenda na-egosi mgbe usoro ọ bụla dị, yabụ họrọ ụzọ anyị wee pịa 'Drive'. (Bike hums) - Ugbu a, ọbụlagodi na ị na-agba ụzọ a kara aka, ịnwere ike ịgbanwe ekwentị gị mgbe ọ bụla ị na-aga n'okporo ụzọ ahụ, n'ihi ya, m gbanwere wee gaa n'aka ekpe, ugbu a ị ga-agakwa, na onye ọ bụla ihe ọ bụla i nwere ike ịhụ enyi n’okporo ụzọ, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịme ntụgharị.
Ka a pụọ. (ọkụ ọkụ) Nke a bụ isi ihuenyo ị hụrụ mgbe ị na-akwọ ụgbọala ka anyị lelee ihe ị ga-ahụ na Zwift, n'elu aka ekpe ị bụ ọgụgụ gị maka ike, kụrụ kwa nkeji na ntughari kwa nkeji. N'elu etiti n'etiti nke a bụ ọsọ dị ugbu a, nke a bụ ebe ekpuchiri ekpuchi, nke a bụ elu gị dị ugbu a na oge kemgbe mmalite.
N'elu aka nri anyi nwere profaịlụ abuo, nke mbu bu mbughari-ebe i no n'okporo uzo tinyere uzo nke nrigo Simon na-agba ugbua na obere obere ahihia ndi na-ese n'elu mmiri bu ndi gi bu ndi ohuru, na n'okpuru na, nke a bụ profaịlụ ka ukwuu nke ụzọ niile. I nwere ike ihu onwe gi. Are bụ naanị akụ ebe ahụ ma enwere akara njedebe.
Ma ndepụta a dị ebe a, nke ahụ bụ ndepụta nke ndị ọkwọ ụgbọala nọ gị nso, na mkpokọta anyị nwere ndị ọkwọ ụgbọala 526 ọzọ na-aga. Ihe ọmụma dị ebe a na-egosi etu onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ dị anya n'ebe ị nọ, mgbe ahụkwa ka ndị ọkwọ ụgbọala ndị ọzọ tere azụ. Enwekwara ọkọlọtọ obodo, watts dị ugbu a kwa kilogram na etu ị siri mee njem. (egwu dị mfe) - Can nwere ike ịdapụ ụkwụ? Ọfọn ị nwere ike Bu.
Enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mma ị nwere ike ime. N'ezie, tupu ịmalite ịkwọ ụgbọala, ị nwere ike ịhọrọ otu ịchọrọ ile anya na Zwift. Naanị ị ga-pịa akara ngosi ahaziri ebe ahụ wee nwee ike ịhọrọ ihe ịchọrọ.
N'ezie, enwere ụlọ ọrụ nlekọta ahụike GCN a na-emeghe emeghe dị ka nhọrọ. Laa azụ na ịnya ịnyịnya, mgbe ahụ n'ezie ị nwere ike ịnya naanị, ọ nweghị ihe ọ bụla dị njọ na nke ahụ, mana kedu maka ịwụ elu na otu ịnyịnya ịnyịnya ma ọ bụ ọbụna agbụrụ? E nwere ọtụtụ ihe omume na - eme n’oge dị iche iche n’ụwa, maka onye ọ bụla Nkuzi Uche, site na mgbe niile ị na-aga n’ọsọ zuru oke na ihe niile dị n’etiti, isonye na mmemme ị ga - eme ihe niile ị nwere ike ime iji gaa menu isi. Pụrụ ịhụ ndepụta nke ihe ndị na-abịanụ na nri n’ebe ahụ.
Naanị pịa ma ị ga-esonye, ​​ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe ga-eme n'ọdịnihu Zwift nwere ndepụta niile. (Ìhè dị egwu) Ihe ọ bụla ị na-agba na Zwift, ị nwere ike izipu ozi oge na otu ma ọ bụ otu onye si na ngwa ngwa Zwift gị ma ọ bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ, site na keyboard. M nnọọ pịnye ke 'Ndewo!' Enwere ekele na akara ngosi ole na ole n'ebe ahụ, dị ka ndị ị ga-eji na ụwa n'ezie dị ka ebili mmiri, ọbụlagodi ikpere ụkwụ na n'ezie ama Zwift Ride On Thumbs Up.
You nwekwara ike ịgbanwe echiche gị site ebe a. (Egwú ndị a ma ama) - Yana frelolo solo ma ọ bụ n'ezie ndị na-agba ịnyịnya ma ọ bụ agbụrụ, enwerekwa ohere n'ebe ahụ ịme mgbatị a haziri ahazi na ọnọdụ ọzụzụ. Ugbu a ka emebere nke ọ bụla iji meziwanye akụkụ dị iche iche nke ịnya ịnya, ikekwe ntachi obi ma ọ bụ ịrịgogoro, yana mmega ahụ ọ bụla.
A na-esonyekwa atụmatụ ọzụzụ zuru oke ma ọ bụrụ na ịmalite ile anya ị ga-ahụ mgbatị 32 GCN. Nke ahụ dị mma. Ma ọ bụ ị mee ka ọsọ gị dị elu n'okporo ụzọ dị larịị, ịrịgo gị, ịgba ọsọ gị ma ọ bụ na ị na-akwado maka ọsọ ahụ.
Ma ọ bụrụ n ’otu ihe kpatara na ha anaghị ese n’elu mmiri gị, ị nwere ike mepụta nke gị site na iji omenaala ma ọ bụ n’ezie mbubata ọrụ sitere na ebe ọzọ. (ọkụ dị egwu) - Ozugbo ịmalitere njem gị na Zwift, ị nwere ike ịlele ọtụtụ ozi na data, gụnyere njem gị dị anya, ọnụọgụ obi, ike ike, ịdị elu na ọbụlagodi ọkụ na ọtụtụ ndị ọzọ - Ee, ọrụ ọ bụla bụ echekwara na profaịlụ gị yana yana akaụntụ ọ bụla ịchọrọ ijikọ, dị ka TrainingPeaks ma ọ bụ Strava ma ọ bụ Atụmatụ nke Taa - ee, enwere olile anya na nke a ga-eme ka ahụmịhe gị ka mma na Zwift ma nyere gị aka ịmeghe ụfọdụ atụmatụ dị mma. - Ee, kpamkpam.
Denye aha na GCN ugbu a mgbe isiokwu a gasịrị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ọdịnaya karịa ugbu a, nke mbụ anyị nwere ntakịrị ozi gbasara mmega ahụ, pịa ala ebe ahụ ma ọ bụ lelee agbụrụ Zwift pịa ala ebe ahụ. - Nke ahụ dị mma.
Echefula inwe mmasị na ịkekọrịta kwa.
Ọ dị njọ ịgba ịnyịnya ígwè kwa ụbọchị?
Ọ bụghị nke ebumpụta ụwaọjọọkana-agba ịnyịnya kwa ụbọchị, ma ị nwere ike ịbawanye uru site na ịme atụmatụ ịmegharị ụdị ụfọdụkwa ụbọchịiji wuo agbanwe agbanwe na usoro ị ga - eme n’ime oge gị ka ị na - ezere mmejọ nke otu mgbatị ahụụbọchị ọ bụla.Eprel 30 2020
Ọtụtụ mmadụ. Ekwenyesiri m ike na m lere ịnyịnya ígwè ma na-eche na ọ bụghị naanị na ọ ga-adị jụụ, mana ọ ga-abụkwara gị nsogbu. Know mara - na-ebute mmebi, ihe mgbu, ụfụ na mmadụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ erectile, ọ nwere ike ịbụ ọrịa cancer prostate.
Ma ọtụtụ n’ime anyị na-agba ịnyịnya ígwè ma anyị enweghị nsogbu ọ bụla. Fọdụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè, n'aka nke ọzọ, na-eme ya. Enwere m, ya mere enwere m ike ịgwa gị na mgbe ihe mere na ọ na-echegbu onwe ya.
Lee - nke a bụ 'chi m! My amụ amụ kpamkpam! 'Anyị ga-alaghachi na nke a ka anyị na-enyocha okwu metụtara ahụike ụmụ nwoke na ịgba ịnyịnya ígwè ha. Iji mee nke a, anyị na otu n'ime ndị isi urologists UK - nwoke aha ya bụ Anthony Koupparis - jikọrọ aka - iji nye ndụmọdụ siri ike, nke bara uru nke ụmụ nwoke niile na-agba ịnyịnya ígwè kwesịrị ị toa ntị na mgbe ịchọrọ ihe kpatara ọzọ karịa ahụmịhe ahụike dị ukwuu iji kwenye ihe ọ sị na ya onwe ya bụkwa nwoke nwoke ndị ikom a na-anọkarị ọdụ n’elu ịnyịnya. Tupu anyi amalite, obu ihe omumu omumu.
Nke ahụ bụ m otú m si agba ịnyịnya ígwè m. Nke a bụ ugbu a ọkpọ na-agba ịnyịnya ígwè na na mere bụ ihe dị nso nke amụ.
Kwụsị ịkwa ọchị n'azụ. Ọ dịghị mma ma ọ bụ bụrụ eziokwu n'ọtụtụ. Agbanyeghị, njakịrị wezuga onwe ya, ọ dị ezigbo mkpa ịghọta mmewere anyị.
Ga-amara, ejiri m n’aka na mgbe ị na-agba ịnyịnya amụ na testicles na-ezobekarị ya. A na-akpọ mpaghara anụ ahụ dị nro n'etiti oke gị na testic gị perineum, ma mgbe ị nọ n'ụgbọ ịnyịnya ígwè, mpaghara a na-akpọtụrụ sadulu gị. N'okpuru anụ ahụ bụ urethra gị, nke bụ ọkpọkọ na-ejikọ eriri afo gị na ụwa dị n'èzí site na amụ.
Perineum nwekwara arịa ọbara buru ibu na akwara pudendal gị, nke na-enye mmetụta nke mpaghara ahụ ma yabụ na-enyekwa aka na ụlọ ahụ. N’elu perineum bụ prostate gị, gland nke na - amịpụta mmiri seminal ma na - agafe eriri afọ. N'iburu anatomi anyị na ọdịdị nke ihe ahụ, ọ dị ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iji mee njikọ dị n'etiti ịgba ịnyịnya na ihe mgbu ma ọ bụ nhụjuanya, nrụrụ erectile na nsogbu prostate, mana ka anyị leruo ya anya.
Ma, echegbula. O nweghi ihe doro anya karịa ihe ị hụburu, ha gwara Anthony ka ọ kwatuo okwu a. Yabụ anyị nwere ọnụọgụ, nrụrụ erectile yana ọrịa kansa prostate, ọkachasị kansa prostate.
Ka anyi bido na nti chiri na mbu, m nwere ike igwa? My na-eto eto amụ m? - Nke ahụ ga - abụ ee
Echere m na anyị maara ibe anyị nke ọma ịkọrọ m banyere ya. Ọ bụ mgbe m nọ n'ọdụ ụgbọ elu ikuku na Indianapolis na anyị na-eme nyocha oghere ikuku, n'ọnọdụ nke ị ga-eji nwayọ nọdụ na igwe kwụ otu ebe ruo nkeji iri atọ ka igwe kwụ otu ebe na-ekpochapụ ikuku ikuku. Ihe ọ pụtara Ọ ga-abụrịrị na ị naghị emegharị ahụ gị elu, n'ihi na ụdị nchagharị ọ bụla ga-agbagọ nsonaazụ ahụ.
Yabụ na ọ bụ ọnọdụ amamịghe na-agba ịnyịnya igwe kwụ otu ebe na mgbe 30 nkeji m rutere ma achọpụtara m ngwa ngwa na enweghị m mmetụta na amụ m, nke na-aga n'ihu, n'ihi na ọ dabara nke ọma na ị maara na mmetụta ahụ alaghachila. Ya mere na njedebe m chere na ọ dịghị ihe dị ogologo oge mere, mana gịnị na-eme n'oge na-adịghị anya? N'ụzọ bụ isi n'ihi nrụgide ị na-etinye ozugbo na perineum, ị na-agbanye akwara ma ị na-agbanye ụfọdụ arịa ọbara na nke ahụ bụ ihe na-akpata ụfụ. Mgbe oge ụfọdụ nọdụrụ ala na akwara ọ ga-ewe obere mmebi nke na-abụghị mmebi ogologo oge, ọ na-ebute isi ike na mpaghara ọ na-eje ozi, nke bụ ihe mere gị.
Ya mere, ọ bụ ụdị nke ịrahụ ụra n'ọnọdụ dị iche ma na-eteta na ogwe aka gị kpamkpam nwụrụ anwụ na ọ na-agwụ ike, mana mmetụta na-alaghachi ngwa ngwa na enweghị mmebi ogologo oge. Yiri nnọọ na nke ahụ dị mma. Ya mere, gịnị ka anyị kwesịrị ime mgbe ahụ? Ọ bụrụ na anyị na-arịa ọrịa ntị chiri mgbe anyị nyara ịnyịnya ígwè, gịnị bụ ọdụ ụgbọ mmiri nke mbụ? Ọ bụrụ n'ịchọta na nke a ga-eme, banye igwe kwụ otu ebe na ọ ga-ada ụda mgbe e mesịrị.
Amaara m karịa m, ị ga-enweta ezigbo igwe kwụ otu ebe na mmadụ ga-ele oche gị anya yana ihe niile so ya. Ugbu a ọ bụrụ na ị banye igwe kwụ otu ebe gị ogologo oge na oge ọ bụla ọ na-ada ụda na mpaghara ahụ ma ọ na-ada ụda ma mgbe ahụ ị na-eme otu ihe ahụ karịa mgbe ahụ ị ga-enwerịrị ike ibute mbibi ogologo oge mana ọgụgụ isi na-ewe ma ozugbo ọ na-enweta nnabata igwe kwesiri. Otu oge ọgbụgba mgbe nke ahụ gasịrị agaghị emebi emebi na-adịte aka na mpaghara a ma ọ bụ ụlọ ọ bụla na ihe yiri ya.
Mgbe ahụ, isiokwu na-esote ga-abụ nrụrụ erectile ma dabere na ihe anyị nụrụ banyere nro, enwere njikọ mgbe ahụ n'etiti ịgba ígwè, ọnụọgụ ugboro ugboro na-eduga na nrụrụ erectile? - azịza ya bụ mba. Ihe ka mkpa bụ mkpa ọ dị nrụrụ erectile na mbu. Usoro ndị na - eduga na nsogbu nrụrụ bụ otu ihe ahụ na usoro nke na - ebute ọrịa obi, nke na - eduga na nkụchi obi.
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ọrịa shuga ma ọ bụ ọbara mgbali elu, ma ọ bụ anwụrụ ọkụ, ikekwe ị nwere nrụrụ erectile, mana ị nwekwara ike ịrịa ọrịa obi. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị toro eto ga-amalite ịgba ịnyịnya ígwè. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè ugbu a ma bụrụ afọ ole na-eto eto na-adịghị arụ ọrụ erectile, ihe mbụ ị chere ekwesịghị ịbụ, 'Oh, nke a bụ sadulu m' naanị n'ihi ịgba ígwè. 'Okwesiri ibu, Agaghị m lie isi m na ájá Nke a nwere ike ịbụ ihe na-egosi ihe na-emebeghị nchọpụta.
Achọrọ m ka m chọpụta nke a ụdị mmebi nke akwara ụbụrụ gị nke ga - eduga na nrụrụ erectile. Yabụ kedu ihe siri ike ime nke ahụ? Wedị ahụ dị egwu nke na-emetụta perineum gị agaghị enye gị ọrụ nrụrụ erectile. Gaa ma lelee ya.
Nke mbụ, iji nweta MOT kwesịrị ekwesị site n'echiche nke obi, gịnị kpatara na ị gaghị enwe nsogbu ịgwọ ọrịa. Ama m, okirikiri ezuola. O meela ka ọ bụrụ ihe na-adịghị ntakịrị ka ọ bụrụ ezigbo nsogbu ahụike na ị nwere ike ịhazi ya. Na mgbe ahụ ị ga-ahụ ha.
Isi okpu agha
Kedụ banyere nsogbu metụtara prostate na ọrịa prostate ọkachasị. N'ụzọ dị mma, ịgba ịnyịnya ígwè enweghị mmetụta na ọrịa cancer prostate. Ma, ọ bụghị naanị otú ọrịa cancer prostate si amalite, ọ bụkwa ajụjụ nke enyochachaghị ọrịa kansa.
Otu ihe anyị ji enye ihe ngosi nke ihe egwu nke ọrịa prostate bụ ịnwale ọbara ma enwere echiche na ọ bụrụ na ị gbaa okirikiri ọtụtụ ị nwere ike iwe iwe prostate gị na nke a nwere ike ịbụ nyocha ọbara gị nke a na-akpọ PSA nke a na-akpọ na-arụ ọrụ. ebuli ọbara ule a prostate kpọmkwem antigen ọbara ule na-erute n'ókè ị mere nke ahụ ọbara ule ọ na-artificially elu na mgbe ahụ ị nwere a dum ụyọkọ nke ule na ị dịghị mkpa n'ihi na ị na-biking na nke ahụ abụghị eziokwu, ọ bụghị ya - enwere O nwere ike ịbụ na ọ ga-emetụta ntakịrị, mana ọ bụrụ na ị lelee nyocha nyocha nke ụlọ nyocha na ọtụtụ, ọtụtụ akara nrịba ama dị na ala maka ọrịa kansa prostate, ịgba ígwè na mmega ahụ enweghị ihe dị iche na nke ọ bụla na-egosi ọrịa kansa prostate, yabụ ịgba ịnyịnya ígwè dị mma , ọ na - eme ka ahụ ike obi gị niile ihe na - ebelata ihe egwu gị nke kansa ọ naghị emetụta Ọrịa Cancer Na-ekwesịghị Ekwesịrị Ma Ọ Na - aga n'ihu. N'ụzọ dị mma, ọ dịghị nnukwu ihe ize ndụ nke ọrịa cancer prostate. Ihe anyị kwesịrị ime dị ka ụmụ okorobịa na-eche banyere ya.
Yabụ ka anyị na-etolite, ohere nke ịrịa ọrịa cancer prostate dị elu. Ihe mbu ikwesiri ime ugbua bu ima ihe ufodu ihe mgbaàmà bu ugbua, ihe ndi anyi n’ele anya bu ihe dika ihe mgbaàmà banyere oru mmiri, mgbu azu, nsogbu igba obara n’ime mmiri, udi ihe ndia, ma oburu n’ichegbu onwe gi. ihe ndị a, ọ bụrụ na ị hụ ihe ndị a ọzọ Mgbe ahụ ị ga-agakwuru onye urologist ma ọ bụ dọkịta ezinụlọ gị ma nwee mkparịta ụka dabara adaba banyere nyocha ahụ. Ọ pụtaghị na a ga-enyocha gị maka ọrịa cancer prostate, mana dọkịta ahụ ga - ejegharị gị site na ihe ọma nke ule ahụ na ikekwe nyocha nke ule ahụ.
Unu abụọ ga-ekpebizi ma ọ̀ ga-eme ka ọ ghara ịga n’ihu. Achọghị m ka ụmụ okorobịa leghara ya anya na nke mbụ. Maka ọtụtụ akụkụ, anyị na-achọta ihe ndị a tupu ụbọchị ndị a ma enwere ike ịhazi ya kpamkpam.
Kedu afọ anyị na-ekwu maka ebe a? Kedu afọ ị kwesịrị ichegbu onwe gị? Enwere m ekele na enwere ike bụrụ ihe atụ dị egwu nke ị maara, ikpe mbụ, mana ị ziri ezi.
Ya mere, na nke m na omume m, enwere m foto gbagọrọ agbagọ. Ya mere, anyị nwere nnukwu ọrụ dị otú a na ị ga-enwe ndị ọrịa site na 30 ruo 80 na 90s na-eche banyere ya, ma ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbaàmà ọ bụla na-echegbu onwe gị, atụla ụjọ, tinye isi na ájá ma duzie nwee mkparịta ụka kwesịrị ekwesị na nyocha nke ihe bụ nsogbu bụ, ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla uhie flags na-eme na ọ bụrụ na ị chọrọ ha Ya mere, ọ dịghị njikọ dị n'etiti ịgba ígwè na ọrịa prostate, ma prostate cancer bụ nnukwu onye maka nnukwu akụkụ nke ndị na-agba ígwè Nsogbu nanị n'ihi na ha bụ ndị ha na-etolite etolite nke mere ka anyị chee echiche banyere ya Amaghị m gbasara gị mana ihe m ga-eji wepụ mkparịta ụka a Anthony bụ na anyị nwere ike ghara iji ahụike anyị gwurie egwu. Anyị kwesịrị ịnwụ ọnwụ nke aka anyị ma chọọ enyemaka mgbe anyị chọrọ ya n'ihi na anyị enwetaghị akpụkpọ ahụ nwere ike ịbụ nnukwu nsogbu anyị ga-eche ihu.
Ugbu a, enwere m ike ịnye ntakịrị ozi karịa nke m nyere gị Gwara m banyere mpempe akwụkwọ m na-atụ n'okporo ụzọ ifufe mana echere m n'echiche ahụ ma eleghị anya, anyị niile kwesịrị ịnwa iso ndị enyi anyị nwee mkparịta ụka na ngwụcha izu a. ọ dịkarịa ala nwee isiokwu a echere m na nke ahụ ga-abụ ihe mmalite. Ugbu a kwa, biko jide n'aka na ọ na-enye m nnukwu mkpịsị aka iji kelee Anthony maka oge ya na ahụmịhe ịkekọrịta anyị na anyị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ isiokwu ọzọ n'otu isiokwu ahụ. Naanị anyị nwere otu na ọwa a ga - enyere gị aka ịzụta ihe ziri ezi maka ị ga - eche nsogbu mbụ nke ntị chiri ihu.
Bikgba igwe ịgba ọsọ 50 kilomita ọ siri ike?
Biking 50 kilomitanye onye na-agba ịnyịnya ígwè bụ onye dabara adaba kwesịrị ịdị nfe dabere na oke ịrịgo agụnyere na nke ahụ50 kilomita igwe kwụ otu ebenọkwasi. Na ọkwa ezi uche dị na ya a50 kilomita igwe kwụ otu ebeịnya ụgbọ ga-agwụ agwụ n'ime awa 3. Ọ dị kasiri ikema ọ bụ dị mfe dị ka ịchọrọ ịme ya.
Ọ dị kilomita 100 kwa izu na igwe kwụ otu ebe?
Ọ bụezin'ihi na gị na ihe ọ bụla ọrụ bụeziọrụ… mana iji nweta ọtụtụ ihe na ya, ị ga - etinye oke gị.100 kilomita n'izuna ugwu na Rolling teren na 16-20mph nkezi ọsọ bụ… grrrr.
Ngwongwo peloton nwere ihe eji eme njem?
Peloton nwereatụmatụ na haIgwe kwụ otu ebe& Treads (na igwe kwụ otu ebe + & nzọ ụkwụ +) a na-akpọ 'Ebe nkiriỊnyịnya”(Ma gbaa ọsọ). Njirimara a zoro ezo n'ihi na ịnweghị ike ịnweta ya na ọbá akwụkwọ klaasị mbụ. Kama, ịnweeiji họrọ “More” taabụ na Ihuenyo mbu.Mar 12 2021
Gịnị na - eme ma ọ bụrụ na mụ agba ịnyịnya ígwè kwa ụbọchị?
Ọrịa obi na akwara obi nwere ọrịa strok, ọbara mgbali elu na nkụchi obi. Mgbeịgba ígwèna - akpali ma na - eme ka obi gị, ngụgụ na mgbasa gị dịkwuo mma, na-ebelata ohere gị ibute ọrịa obi.Cygba ígwèna-ewusi akwara obi gị ike, na-ebelata izu ike izu ike ma belata ogo abụba ọbara.
I nwere ike ida abụba afọ site n’ịgba ígwè?
Ee,ịgba ígwè nwere ikeEnyemakaida abụba abụba, ma ọ ga-ewe oge. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara mgbe nileịgba ígwènwere ike ịkwalite n'ozuzuabụba ọnwụma kwalite ahụ ike. Ijibelatan'ozuzuafọgirth, agafeghị oke-ihe omume aerobic, dị kaịgba ígwè(ma ọ bụ n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí), dị irè iji belataafọ abụba.Bọchị 2 2021
Ọ dị kilomita iri ise dị ukwuu igwe kwụ otu ebe?
.B.iri isemile ride dị ukwuuịgba ígwèebumnuche na atụmatụ ọzụzụ na-eme ka ọ ghara ịda mbà ma mezuo ya. Dị ka ọ na-adị, ị ga-azụ ihe karịrị izu iri n’izu iri n’izu iri na abụọ, mana enwere ike ime ya n’izu asatọ. Ma ọ dịkarịa ala, ị kwesịrị ịnwale ịnyagharị ugboro atọ kwa izu ka ị na-ewu ụlọ maka ebumnuche ahụ.
Inggba ịnyịnya ígwè kilomita 40 kwa ụbọchị ọ karịrị akarị?
40 kilomitaabụghị ogologo ihe karịrị ịnya ịnyịnya na aigwe kwụ otu ebe, ma ọ ga-achọ ezigbo mgbatị ahụ.40 kilomitaabụghị ogologo ihe karịrị ịnya ịnyịnya na aigwe kwụ otu ebe, ma ọ ga-achọ ezigbo mgbatị ahụ. Ma ebe ọ bụ na onye na-agba ígwè abụghị ụgbọ ala, ọnụọgụ nke40 kilomitaezughị ezu iji chọpụta mbọ a gbara.
Ọ nwere ebe ndị ọrụ ebere na-agba ịnyịnya iji bulie ego?
Charity igwe kwụ otu ebe na nsogbu ịgba ịnyịnya bụ ihe a na-ewu ewu n'aka nke na-eweta ego maka ihe ọ bụla na-eme ka ị na-agbachitere. Ma ọ bụ ị pụrụ ịbụ onye na-anụ ọkụ ọkụ n’ịgba ígwè, na-achọ ịmanye onwe gị ime oke gị. Kedu ụzọ ọ bụla, ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị ka anyị na-enye ụfọdụ nsogbu ịma aka kacha mma na ahụmịhe ụwa nwere ike ịnye.
Kedu ihe omume ịgba ịnyịnya kacha mma maka ọrụ ebere?
MA Ọ B Search Search Ihe omume igwe kwụ otu ebe Họrọ site na ihe karịrị 150 ihe omume ebere kacha elu emere ihe omume Họrọ ihe omume Prudential Gbaa ịnyịnya London 46BM RIDEPrudential Gbaa ịnyịnya London 100 2020 Top Charity cgba ígwè Events Gịnị na-abịa na okirikiri maka ọrụ ebere kalenda? Ọ gaghị egbu oge isonye otu n'ime nnukwu ihe ndị a. Ihe niile 250 nke ihe kacha agba agba
Kedu ihe bụ ọrụ ebere maka Ọrịa Cancer?
Choputa ihe. Ntachi obi maka ọgwụgwọ bụ ihe omume pụrụ iche nke ịgba ọsọ otu egwuregwu 12, na-eweta ego dị mkpa maka nyocha ọrịa ụmụaka. Choputa ihe. Macsim Sydney na Surfers Ride na-eme kwa afọ bụ ụbọchị 7 na-atọ ụtọ, ihe omume 900 kilomita na-eme njem iji nweta ego maka Nna Chris Riley's Youth Off The Streets. Choputa ihe.